वामदेवलाई फेरि ‘ब्याक फायर’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more वामदेवलाई फेरि ‘ब्याक फायर’
वामदेवलाई फेरि ‘ब्याक फायर’	प्रतिपक्षी दल र जनमानस मात्र होइन, नेकपाकै नेताहरू पनि सार्वजनिक विरोधमा
फागुन १४ गते, २०७६ - ०९:२४
संविधान संशोधन गर्ने निर्णयले जनमत नै पार्टीको विपक्षमा जान सक्ने बुझाइ नेताहरूमा छ । त्यसैले अघिल्लो निर्णयबाट पार्टी ‘ब्याक’ हुने सम्भावना छ । उपाध्यक्ष गौतमले संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए उनलाई लैजाने विषयमा भने नेताहरू सकारात्मक छन् ।
‘हामीले ब्याक फायर होस् भन्ने नियतले उहाँ (गौतम)को विषयमा निर्णय गरेका थिएनौँ, तर जनमत विपक्षमा देखियो । यो स्थिति विश्लेषण गरी पार्टीले निर्णय फेरबदल गर्न सक्छ, त्यसबारे बैठकमै औपचारिक छलफल हुनेछ,’ सचिवालयका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, संविधान संशोधनविनै उहाँले राष्ट्रिय सभामा जान चाहनुभयो भने पार्टीले पठाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिन सक्छ । यो उहाँको प्रस्ताव र रुचिमा पनि भर पर्ने कुरा भो ।’
कार्यदल बनाउने निर्णयसँगै नेता गौतम पनि विवादमा परेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपछि पटक–पटक झ्यालबाट संसद् प्रवेश गर्ने प्रयास गरेर पदलोलुपता देखाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । विपक्षीहरूले मात्रै होइन, पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा उनीसँग कि राष्ट्रिय सभामा मात्रै भए पनि जाने अथवा पूरै प्रक्रियाबाट ‘ब्याक’ दुई विकल्प मात्रै बाँकी छन् । हक्की र अस्थिर स्वभावका गौतम जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अघि बढ्न सक्ने र पछि पनि हट्न सक्ने भएकाले सचिवालयले उनकै प्रस्तावअनुसार निर्णय गर्नसक्ने नेताहरू बताउँछन् ।
कार्यदल बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीको पनि सहमति थियो । कार्यदललाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भूमिका र अधिकार बराबर हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक संशोधनका विषयबारे गृहकार्य गर्न टास्क दिइएको थियो । तर, सोमबार कार्यदल गठनबारे समाचार बाहिरिएपछि पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध सुरु हुँदै जाँदा गौतमविरोधी जनमत निर्माण भएको छ । नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाउन थालेका छन् ।
सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार मध्यराति ट्विट गर्दै छलढाँटको राजनीति धेरै दिन नचल्ने बताएका छन् । ‘अभ्यास, अनुभव र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा गर्दै आएका भित्रैबाट यतिवेला एकाएक संविधान संशोधनको कुरा सुनिँदै छ । मानिसहरू उदेक मान्दै छन् ! केका लागि संशोधन ! खराखरी बहस गर्ने वेला आएजस्तो छ । कुरा लुकाएर, ढाँटछल गरेर कति दिन चल्छ ? कसरी चल्छ ? राजनीति गरिन्छ, जुवा खेलिन्न,’ पोखरेलको ट्विटमा उल्लेछ ।
फागुन १४ गते, २०७६ - ०९:२४ मा प्रकाशित